Ciidamada Xasilinta oo qabtay Gaari uu lahaa Horjooge Kaam oo lagu dilay Deyniile. – Hornafrik Media Network
Markii ugu horeysay Ciidamada xasilinta ayaa xalay waxa ay howlgallo qorsheysan ka sameeyeen Xaafado ka tirsan Wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye.
Ciidamada ayaa howlgallada waxa ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan halka loo yaqaano tabeelaha Sheekh Ibraahim,kadib markii habeen ka hor lagu dilay Cabdi Nuunoow oo ka mid ahaa Ergadii Xildhibaanada ku soo doortay Baydhabo isla markaana Gaari uu watay laga qaatay.
Dadka deegaanka qaarkood oo la hadlay Warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in ay ku soo baraarugeen xalay Ciidamo kor taagan kuwaas Guri Guri u baarayay Xaafadaha Tabeelaha Sheekh Ibraahim iyo Xaafadaha ku teedsan Wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye.
Saraakiil ka tirsan Hay’adaha Ammaanka ayaa HornAfrik u sheegay in Ciidanka Xasilinta Caasimadda ay qabteen Gaariga Marxuunka la dilay oo ahaa Spacio, islamarkaana Habeen hore ay horay u wateen Dableydii Dishay Cabdi Nuunow oo sidoo kalena ahaa Guddoomiye Xero ay dagan yihiin Barakacayaal oo ku taalla Tabeelaha Sheekh Ibraahim.